Google dia nanala ny bokotra "Jereo ny sary" amin'ny valin'ny fikarohana | Famoronana an-tserasera
Melisa Perrotta | | Graphic Design, sary, Fitaovana famolavolana
Google dia nanolotra fanovana vaovao momba ny fikarohana sary tanjona ny hampihenana ny fanaovana kopia sy ny fampiasana tsy ara-dalàna azy io. Noho io antony io dia nesoriny ny bokotra "Hijery sary" izay niseho rehefa nisafidy sary aorian'ny fikarohana. Tena nilaina tokoa io bokotra io satria namela ny mpampiasa hahazo ilay sary mivantana avy amin'ny fikarohana. Noho izany, tsy voatery nankany amin'ny pejy web nampiantrano azy ianao.
Ny fampahalalana dia notaterin'ny sampana fikarohana ao amin'ny Google "Search Liaison". Search Liaison dia nanazava tamin'ny alàlan'ny twitter izay tadiavin'izy ireo manamafy ny fifandraisana misy eo amin'ny pejin-tranonkala sy ireo mpitsidika azy ireo. Raha tsy misy an'ity bokotra ity dia terena hiditra amin'ny tranonkala ny mpampiasa ary hijery ny atiny atolotra azy.
Inona no vokany eo amintsika?
Ny fepetra vaovao dia miabo ho an'ny mpaka sary sy ny banky sary efa nitady fiarovana. Na izany aza, olana lehibe kokoa ho an'ny mpampiasa izany, indrindra ho an'ny mpamorona. Amin'ny ankapobeny, ny fikarohana Google manahirana ny fidirana sary ny mpampiasa ka mahatsapa izy fa tsy voatosika haka izany.
Na izany aza, io fanovana io tsy midika hoe tsy azo atao ny mahazo ny sary. Manomboka izao, ny mpampiasa dia tsy maintsy manao ny fikarohana ary manomboka eo dia miditra ao amin'ny tranonkalan'ilay sary ary miandry ny hamoahana azy. Azonao atao ny mahita azy ao anaty atiny ary avy eo mandika na manangona azy amin'ny tranokala voalohany.
Fa toy ny hoe tsy ampy izany, ankoatry ny fanesorana ity bokotra ity; Google koa nanala ny safidin'ny fikarohana sary. Eny ... fantatro izay eritreretinao ... tsia. Fa milamina, mbola afaka mitady sary mifamadika ianao. Midika izany fa raha tokony hampiasa ny bokotra izay nampiseho sary mitovy aminy kokoa isika dia tsy maintsy hisintona azy ireo mankamin'ny boaty fikarohana. Na izany aza, tsy hanome soso-kevitra ho antsika sary mitovy amin'izany izy io. Ireo fanovana Google rehetra ireo dia mifandraika amin'ny filàna eAza mitady sary tsy misy mari-drano.
Google dia mety manandrana mamorona fifandraisan'ny mpampiasa bebe kokoa; iza izao no tsy maintsy hiditra ny pejy, hamakivaky ary hijery atiny sy dokam-barotra. Na angamba manandrana misoroka ny fangalarana sary ianao na manana zon'ny mpamorona na tsia. Ny azo antoka dia ireo fiovana ireo hisy fiantraikany be amin'ny asan'ny mpamorona sary, mahatonga ny asanao hiadana kokoa sy ho sarotra kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Google dia nanala ny bokotra "Jereo ny sary" amin'ny valin'ny fikarohana
Cristina Bermejo dia hoy izy:
Bokotra ankavanana> sokafy sary amin'ny fikandrana vaovao, ary raikitra
Valiny tamin'i Cristina Bermejo
Erii Ventura Ch dia hoy izy:
Saingy tsy azonao intsony ilay safidy ahafahanao mahita ny sary amin'ny habe rehetra azo atao: /
Valiny tamin'i Erii Ventura Ch
Lanena amaro dia hoy izy:
Mandeha amin'ny haben'ny fitaovana ianao ary eo no ametrahanao ny habeny «lehibe kokoa noho». Mbola malahelo ihany.
Valiny tamin'i Lanena Amaro
Adrian macrina dia hoy izy:
Eny, saingy nesoriny ihany koa ny mahita ny habe hafa mitovy amin'ilay sary ary nahita ireo sary nitovy izay nampiasako bpm be dia be izay nanome azy ireo ny google !!!!
Valiny tamin'i Adrian Macrina
Virginia Canadas dia hoy izy:
Omenao izany hijerena ny pejy ary amin'ny kaody tadiavinao ny sary, alainanao tahaka ny URL ny jpg amin'ny varavarankely iray hafa ary mivoaka amin'ny habe tany am-boalohany izy.
Valiny tamin'i Virginia Cañadas
Silvana Cados placeholder sary dia hoy izy:
Ho an'ny famoronana dia hisy foana ny vahaolana! Ary tsy voatery mila mahita izay avoakan'ny pejy ianao
Mamaly an'i Silvana Cados
Malena Lisette dia hoy izy:
Baia baia izay manazava ny antony tsy nahafahako naka ny sarin'i Kolonely León tao amin'ilay tantara Tiorka ary tsy tsapako akory: Tsy haiko hoe ahoana no mety ho variana loatra aho
Valiny tamin'i Malena Lisette
"Cat Thing" rafitra modules miovaova ho trano fonenan'ireo